बुर्तिबाङमा महिनामा दुई पटक कृषि हाट बजार सन्चालन गरिने ! – ebaglung.com
बुर्तिबाङमा महिनामा दुई पटक कृषि हाट बजार सन्चालन गरिने !
२०७३ माघ १६, आईतवार ११:०८	Top News, अन्य समाचार
छविलाल पाण्डे, बुर्तिवाङ २०७३ माघ १६ । कृषि विकास समिति बुर्तिवाङको आयोजनामा शनिवार देखी बुर्तिवाङ बजारमा कृषि हाट बजार सुरु गरिएको छ । एक दुई हप्ता सन्चालन गर्ने त्यसपछी बन्द गर्ने गरिएकोे हाट बजार अब निरन्तरता दिने समितिका कोषाध्यक्ष विष्णु विश्वकर्माले जानकारी दिए । तीन वर्ष पहिले देखी हाट बजार सन्चालनमा आएको थिएन । ८ महिना पहिले कृषि हाट बजार सुरु गरिएको थियो तर विभिन्न कारणले दुई हप्ता मात्र सन्चालनमा आएर पुन राकिएको थियो ।
अबदेखि बुर्तिबाङ बजारको भगवती टोलामा रहेको कृषि संकलन केन्द्रमा महिनाको २ पटक नियमित कृषि उत्पादन विक्रिको लागि राखिने छ । प्रत्यक महिनाको १ गते र १५ गते १५÷१५ दिनको अन्तरमा विभिन्न प्रकारका तरकारी, टमाटर, स्थानिय ध्यु तथा मह र खसी, बोका तथा खुकुरा विक्रिको लागि राखिने समितिले जनाएको छ ।
सुरुको दिन किसानहरुले ब्रोकाउली, काउली, साग, टमाटर लगायतका तरकारी जन्य उत्पादन विक्रिका लागि राखेका थिए । कृषि संकलन केन्द्र तथा हाटबजार सञ्चालननहुँदा उत्पादित कृषिजन्य बस्तुको बजारीकरणमा समस्या हुने, उचित मुल्य नपाईने, अपमानित हुनुपर्ने जस्ता कारणले किसानहरु निरुत्साहित हुँदै गएकाले प्रबद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको सचिव डिलबहादुर कुमालले बताए । नियमित हाटबाजरमा कृषि उत्पादन ल्याउने किसानलाई समितिले निशुल्क विउ वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । हाटबजारलाई विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य समितिले राखेको छ ।
नव प्रतिभा सहकारीको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा होमनाथ अर्याल निर्वाचित !
संविधान संशोधनमा एमालले गरेको किचलो राष्ट्रिय हित विपरित : उपप्रधान मन्त्री निधि